Namoaka fanambarana momba ny fampihorohoroana ny fizahantany ao Myanmar
Home » Travel Associations News » Namoaka fanambarana momba ny fampihorohoroana ny fizahantany ao Myanmar
Myanmar Marketing Marketing dia te-haneho ny fanohanany ireo olona nafindra toerana rehetra tao amin'ny Fanjakan'ny Rakhine Avaratra sy ivelan'i Rakhine taorian'ny fanafihan'ny mpampihorohoro tamin'ny herinandro lasa teo akaikin'ny Bangladesy sisintany. Manantena izahay fa ny olona rehetra avy amin'ny fivavahana sy ny firazanana rehetra dia hahita toe-javatra azo antoka hipetrahana.
Mino hatrany izahay fa ny fizahantany dia fomba tsara hampifandraisana ny olona ary hitondra fampandrosoana sy fandriampahalemana Myanmar ho an'ny olona avy amin'ny firazanana sy fivavahana rehetra ary miantso mpizahatany eran'izao tontolo izao izahay mba hanohy hitsidika Myanmar. Indrindra ankehitriny zava-dehibe ny fandraisana fanapahan-kevitra tonga saina sy hisafidy ny hanohana ny olona rehetra ao amin'ny firenena. Tsidiho azafady Myanmar amin'ny fomba maharitra hanohanana ny olona avy amin'ny fiarahamonina rehetra. Myanmar dia firenena samy hafa foko misy olona miara-monina milamina. Tsapan'ny MTM fa ny fizahantany ao Myanmar dia mbola eo am-piandohan'ny fahazazany ary afaka mahatratra faritra sy olona voafetra ihany, kanefa zava-dehibe ny fanohizana mandroso sy manitatra fizahan-tany maharitra eto amin'ny firenena.
Hatramin'izao Myanmar matetika dia eo ambanin'ny laharana maro manerantany ary ny taona faramparany dia naneho fiakarana sy fanatsarana tsy tapaka amin'ny lafiny maro ho an'ny olona maro. Hatreto dia mbola tsy nahatratra ny fahafaha-manao fizahan-tany feno ny firenena ary mbola lavitra ny lalana.
Myanmar mirefy 2000 kilaometatra mahery avy any avaratra ka hatrany atsimo ary manana toetra, kolontsaina ary zava-mahavariana mahavariana atolotry ny mpizahatany. Izy io koa dia iray amin'ireo firenena tia mandray sy sariaka indrindra eran'izao tontolo izao ary azo antoka fa azo tsidihina raha mbola mijanona ao anaty faritra maitso ianao. Ireo faritra maintso ao amin'ny sari-tany nomen'ny Biraon'ny raharaham-bahiny UK dia azo antoka ny fivezivezena ary hahatonga anao ho be atao foana na dia hatramin'ny 6 herinandro aza.
Myanmar Marketing Marketing dia manantena ny hanarahan'ny olona ny torohevitra nomen'ny Governemanta Myanmar ary koa ny governemanta vahiny izay hitsidihana soa aman-tsara ao Myanmar ary fantaro ho anao ny tena firenena sy ny mponina ao aminy.
Herinandron'ny hetsika momba ny asa any Malezia 2017
Swiss Bellhotel sy Gulf Air FalconFlyer: fiaraha-miasa mahafa-po